Ukongeza koomatshini bokuthunga, abona bangcono kwaye banezibonelelo ezingenakuphikiswa
Ukongeza koomatshini bokuthunga
Ihlabathi lokuthunga litsala abantu abaninzi ngakumbi. Oko kukwazi ukwenza utshintsho kwiimpahla okanye, ukufumana banzi uyilo lwakho isoloko iyinto eqinisekisayo. Ke, baninzi abathi yonke imihla bagqibe ukuthenga zabo umatshini wokuqala wokuthunga. Abanye kufuneka bahambe kancinci kwaye ngenxa yoku, baya kufuna umatshini ohambelana neemfuno zabo.
Ukuba ufuna ukufumanisa ukuba lolona khetho lungcono, ungaphoswa yiyo yonke into esikuxelela yona namhlanje. Ukusuka koomatshini bokuthunga bexabiso eliphantsi nabalula kubaqalayo, ukugqitha okanye awona achubekileyo kunye nemizi-mveliso.Yeyiphi kuzo oza kukhetha kuyo?
oomatshini bokuthunga ukuqalisa
Ukuba ufuna enye umatshini wokuthunga ukuqalisa, ngezantsi uya kufumana iimodeli ezine ezilungele abaqalayo okanye imisebenzi elula:
Umzekelo Izixhobo Ixabiso
Mvumikazi Promise 1412
-Iintlobo zemithungo: 12
-Ubude nobubanzi bomthungo: Iyalungiseka
-4-inyathelo lomngxuma weqhosha elizenzekelayo
-Ezinye iimpawu: i-compact design, i-seams yokuqinisa, i-zig-zag 133,24 €
Jonga umnikeloQaphela: 9 / 10
Mvumi 2263 Imveli
-Iintlobo zemithungo: 16
-Ubude bomthungo kunye nobubanzi: Ukulungelelaniswa ukuya kwi-4 kunye ne-5 mm ngokulandelanayo
-Iqhosha elizenzekelayo amanyathelo ama-4
-Ezinye iimpawu: Ukuthunga ngokuthe tye kunye ne-zig-zag, izixhobo, unyawo locinezela 137,75 €
Isimbo seAlpha 40
-Iintlobo zemithungo: 31
-Ubude bomthungo kunye nobubanzi: Ukulungelelaniswa ukuya kuthi ga kwi-5 mm
-Ezinye iimpawu: I-LED, unyawo olulungelelanisiweyo, isibambi se-spool yensimbi 189,99 €
Jonga umnikeloQaphela: 10 / 10
-Iintlobo zemithungo: 40
-5 imibhobho yamaqhosha ezenzekelayo, inyathelo eli-1
-Ezinye iimpawu: Imisebenzi ye-patchwork kunye ne-quilting 171,31 €
Nangona ingekho kule theyibhile ingentla, nawe awukwazi ukuyiyeka Umatshini wokuthunga weLidl, imodeli emangalisayo ukuqala ngayo kodwa ukufumaneka kwayo kulinganiselwe kwisitokhwe sevenkile enkulu.
Ngayo nayiphi na imodeli etafileni uya kuba ulungile, kodwa ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga ngamnye wabo, ngezantsi siya kukuxelela iimpawu eziphambili zoomatshini bokuthunga abaye baba lukhetho olufanelekileyo kwabo bathe bathunga. ufuna ukuqala kwilizwe lokuthunga okanye abo bafuna ukhetho olulungileyo lwexabiso:
Mvumikazi Promise Machine...
Ukuba ukhangela umatshini wokuthunga osisiseko oneempawu ezibalulekileyo zokuqalisa, i Umatshini wokuthunga I-Promise 1412 iya kuba yeyakho. Ukuba uceba ukwenza i imisebenzi elula efana ne-hemming okanye i-zipping, kunye namaqhosha, aya kulungeleka kuwe. Ukongezelela, ngumatshini osemgangathweni ngexabiso elihle. Kulula ukuyisebenzisa kwaye njengoko sithetha, kufanelekile ukuba usaqala nje. Nangona inezititshi ezili-12 ezahlukeneyo, kufuneka wongeze iifestoni zokuhombisa.
Ixabiso layo lihlala lijikeleze 115 euro kwaye unako yiba ngowakho apha.
Mvumi 2250 Imveli
Mvumi 2250 Tradition -...
Ngenye ye oomatshini bokuthunga abathengiswa kakhulu, ke, sele sinedatha elungileyo ngaphambili. Inemisebenzi emininzi kwaye iyimfuneko xa uqala kwilizwe lokuthunga. Kwakhona, ayisiyiyo loo nto kuphela, kuba ngezititshi ezili-10 zizonke, ziya kufezeka xa sele uneziseko. Ngoko, awuyi kuba mfutshane. Yenye yezona zikhaphukhaphu, ngoko ke ungayithutha ngokweemfuno zakho.
Ixabiso lalo matshini wokuthunga ukuqala malunga 138 euro y ungayithenga apha
Umatshini wokuthunga we-ALFA,...
Omnye oomatshini abayimfuneko yi-Alfa Style 40. Ngaphezu kwayo nantoni na ngenxa yokuba ilula kakhulu, kubo bonke abo bangenayo ingcamango yokuthunga. Yintoni egqithisile, imisebenzi yayo igqibelele njengoko umsonto oluzenzekelayo, iqhoshana kwinqanaba 4 amanyathelo. Kananjalo inokukhanya kwe-LED, kunye ne-blade yokusika intambo. Khumbula ukuba kukho izititshi ezili-12 kunye ne-scallops ezimbini zokuhombisa. Yintoni eya kuba sisiseko kwimisebenzi eqhelekileyo.
Kule meko, ixabiso liphakama malunga ne-180 euro. Yithenge apha.
Mzalwana CS10 Machine...
Ukuba ufuna ukuzikhuthaza ngeyokuqala umatshini wokuthunga we-elektroniki, le iya kuba yimodeli yakho engcono. Akunjalo ngenxa yokuba ye-elektroniki kunzima ukuyisebenzisa, ngokuchaseneyo. Ukongeza kwezona zithungo zisisiseko, ungaqala kwakhona amanyathelo akho okuqala kwihlabathi le patchwork kunye nokuqubha. Kulula ukuyisebenzisa njengokukhetha umsebenzi esiza kuwenza, ubude kunye nobubanzi bomthungo ngamnye kwaye yiloo nto.
Into enhle kukuba xa uyayazi indlela yokusebenza kunye neyona nto ilula, ikuvumela ukuba uhambe kancinci, ngenxa yokuba uphelele kangakanani. Konke oku ngexabiso malunga 165 euro. Ukuba uyayithanda, unako Thenga apha.
Ukuba ufuna ukubona iimodeli ezininzi ze oomatshini bokuthunga umzalwana, Ngena ikhonkco esisandula ukukushiya.
oomatshini bokuthunga abaphantsi
Ukuba oko ukukhangelayo lolona khetho lusezantsi kuzo zonke, ngoko unako oomatshini bokuthunga bexabiso eliphantsi nangona sikhethe ezinye iimodeli ezinexabiso elikhulu lemali:
-Iintlobo zemithungo: 13
-Ubude kunye nobubanzi bomthungo: Ayilungelelanisi
-4 istroke grommet
-Ezinye iimpawu: Inaliti kabini 115,36 €
-Iintlobo zemithungo: 17
-Ubude nobubanzi bomthungo: imilinganiselo emi-2
-Ezinye iimpawu: Ukujija ngokuzenzekelayo, ukukhanya, ingalo yasimahla Akukho mveliso ifunyenweyo
IMvumi elula 3221
-Iintlobo zemithungo: 21
-Iqhosha elizenzekelayo ixesha eli-1
-Ezinye iimpawu: ukukhanya, ingalo yasimahla, umsonto ozenzekelayo 179,99 €
Jonga umnikeloQaphela: 9/10
Alpha Okulandelayo 40
-Iintlobo zemithungo: 25
-Iqhosha elizenzekelayo inyathelo eli-1
-Ezinye iimpawu: Ukuxhathisa, kulula ukuthunga 232,99 €
Umtshini weJata MC695...
Sijongene nowona matshini wokuthunga unexabiso eliphantsi. I-Jata MC695 ineentlobo ezili-13 zemithungo. Ngaba kakhulu umatshini kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ulula xa kufikwa ekuthuthweni. Inezixhobo ezininzi, kunye nokukhanya okudibeneyo. Iphelele kwabo baqalayo kodwa nakwabo sele befuna enye into. Mhlawumbi inqaku elibi kukuba ubude kunye nobubanzi bomthungo abulungiswanga.
Ixabiso layo alinakuphikiswa kwaye inokuba yeyakho 113 euro. uyamfuna Yithenge apha
Umatshini wokuthunga weMvumi...
Ngolunye lolona khetho lungcono. Iimbono ziyavuma ukuba ngumatshini wokuthunga ukuqala ngawo, kodwa nakubantu abafuna into engakumbi kwixesha elifutshane. Ke, ukuba ungatyala imali encinci, le yimodeli yakho. Inezithungo ezingama-21 ezinobude nobubanzi bokulawula. Yintoni egqithisile, uya kunika 750 imithungo ngomzuzu, ingalo yamahhala kunye nokukhanya okudibeneyo.
Kule meko, sibheja ngexabiso elikhulu lemali kwaye kukuba nangona ingabizi kakhulu njengeemodeli ezimbini zangaphambili, iSinger Simple ngumzekelo omangalisayo wokungena onokuthi ube ngowakho nge-158 euro kwaye unako. Thenga apha.
Omnye oomatshini bokuthunga abaneempawu eziphambili ngulo. Inguqulelo entsha ye Oomatshini bokuthunga iAlfa Okulandelayo. Zininzi iimodeli kolu luhlu ezineempawu ezifanayo. Kodwa kule meko, sishiywe kunye ne-Alfa Next 45. Ilungele abo baqalayo okanye abo bafuna umatshini wabo wokuqala wokuthunga ukuba uhlale ixesha elide. Nge 25 stitches kunye 4 scallops zokuhombisaBaya kuhlangabezana nokulindela kwakho.
I-Alfa Next 45 yimodeli exabiso layo malunga ne-225 euro kwaye ungathini Thenga apha. Ubukho babo bulinganiselwe ngoko ukuba abanaso isitokhwe xa usithenga, ungathenga nayiphi na imifuziselo yabo kusapho olulandelayo kuba zifana kakhulu ngokweempawu.
Olunye ukhetho lwexabiso eliphantsi ngolu. I umatshini wokuthunga weToyota I-SPB 15 Ngolunye ukhetho olukhulu. I-compact, ilula kwaye ineentlobo ezili-15 zokuthunga. Phakathi kwazo, sigxininisa iintlobo ezi-4 zokuhombisa, i-hem stitch kunye ne-zig-zag. Ikwanayo nelever yokubuyisela umva eluncedo kakhulu.
Ixabiso lomatshini wokuthunga weToyota SPB15 yi-euro eyi-112 kuphela kwaye unako Thenga apha.
oomatshini bokuthunga abachwepheshile
Ukuba ufuna ntoni ngu umatshini wokuthunga weengcali, ngezantsi sikunikeza ezona modeli zigqibeleleyo kwabo bafuna izibonelelo kunye nemisebenzi ekumgangatho ongcono:
UBernett Sew & Hamba 8
-Iintlobo zemithungo: 197
-7 eyelets inyathelo eli-1
-Ezinye iimpawu: Quilting, Patchwork, 15 iindawo inaliti 349,99 €
Imvumi uCurvy 8770
-Iintlobo zemithungo: 225
-Ezinye Iimpawu: Iipateni zeAlfabhethi, i-Smart Threading Ixabiso alifumaneki
Jonga umnikeloQaphela: 8 / 10
Mvumikazi Starlet 6699
-Iintlobo zemithungo: 100
-6 eyelets inyathelo eli-1
-Ezinye iimpawu: izithuba zeenaliti ezili-12, isakhiwo sesinyithi 279,99 €
Isimboli yeVenkile yeVenkile 9960
-Iintlobo zemithungo: 600
-13 eyelets inyathelo eli-1
-Ezinye iimpawu: Izibane ze-2 ze-LED, izithuba zeenaliti ze-26 749,00 €
-Iintlobo zemithungo: 60
Ezinye izinto: Isibonisi se-LCD, unyawo lokucinezela ukuphakama kabini 649,00 €
Xa sithetha ngoomatshini bokuthunga abachwephesha, sicacile ukuba sele sithetha ngemibandela emikhulu. Iimpawu ezingakumbi ze ugqibezele umsebenzi nje ngobuchule. Kule meko, uBernett Sew & Go 8 usishiya kunye ne-197 stitches. Kuzo, ezingama-58 zihombise. Uya kufumana kwakhona izithuba zeenaliti ezili-15 kunye nokuphakama okuphindwe kabini konyawo lomcinezeli. Ixhathisa kakhulu kwaye inengalo ekhululekile.
Ixabiso lalo matshini wokuthunga wengcali 399 euro kwaye unako Thenga apha.
Imvumi uCurvy 8770 -...
Ngaphandle kwamathandabuzo, sijamelene nolunye lolona khetho lubalaseleyo. Ngaphambi kophawu esilwaziyo sonke kwaye oluhlala lusibonisa ezona zikhetho zibalaseleyo. Kule meko, zidityaniswe nenani le-225 lilonke. Ewe ndiyabulela kuloo nto ungavumela intelekelelo yakho ibhabhe. Ukongeza, ineepateni, kunye nobude be-stitch obulungelelanisiweyo kunye nobubanzi kunye nenkqubo yokujija ngokuzenzekelayo. Inaliti ephindwe kabini kunye neendidi ezisixhenxe zamaqhosha… yintoni enye esinokuyicela?
Ukuba unomdla, ungathenga iSinger Curvy apha
Sele siqalisile ngezititshi ezili-100 zizonke. Ke, sinokufumana umbono wokuba ngomnye umatshini oza kusivumela ukuba siqhubele phambili nanini na sifuna. Ubude kunye nobubanzi bazo bulungelelaniswa. Ukongeza, kufuneka kukhankanywe ukuba unayo Izithuba zeenaliti ezili-12 kunye nengalo yasimahla kunye nokukhanya kwe-LED. Akukho nawona malaphu ashinyeneyo aya kuyixhathisa.
Nangona ingumatshini wokuthunga ochwepheshile, iSinger Starlet 6699 inokuba yeyakho kuphela 295 euro. Ngaba uyayifuna? yithenge apha
Imvumi yeQuantum Stylist...
Ewe, ukuba sithetha ngoomatshini bokuthunga abachwephesha, asikwazi ukulibala iSinger Quantum Stylist 9960. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezo zonke izinto onazo engqondweni ziya kuzisebenzisa. Ineentlobo ezingama-600 zokuthunga, zombini ubude nobubanzi bayo bunokulungiswa. Sinokuthi kunjalo enye yezona zinamandla kwimarike.
Ixabiso layo ngu 699 euro kodwa ngembuyekezo siya kufumana omnye woomatshini bokuthunga abagqwesileyo kwimarike kwaye unokuthenga ukusuka apha.
I-Alfa Model 2160-Umatshini...
Sishiywe ngemodeli yomatshini we-Alfa oneempawu ezigqibeleleyo, kunye nesikrini se-LCD ekulula kakhulu ukusisebenzisa. Kuya kuba njalo igqibelele kumalaphu angqindilili, ukuze wenze imisebenzi eyahlukeneyo ngesiphumo esifanelekileyo. Umtya ozenzekelayo, kunye ne-60 stitches kunye neentlobo ezisixhenxe zamaqhosha.
Ixabiso lalo matshini wokuthunga oyingcali yi-518 euro kwaye unako Thenga apha.
Indlela yokukhetha umatshini wam wokuqala wokuthunga
Ukukhetha umatshini wam wokuqala wokuthunga isenokungabi ngumsebenzi olula. Sonke sicinga ngomatshini olungileyo, onganyangekiyo owenza umsebenzi ngokugqiba okuhle. Kodwa ukongeza koku, kukho ezinye iinkcukacha ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
Yintoni esiza kuyinika yona?
Nangona inokuba ngomnye wemibuzo ephindaphindwayo, ibalulekile. Ukuba uza kuyisebenzisa kuphela eyona misebenzi isisiseko, ayifanelekanga ukuchitha imali eninzi kumatshini wobuchwephesha. Ngaphezu kwayo nantoni na ngenxa yokuba awuyi kusebenzisa isiqingatha semisebenzi yayo. Ngoku, ukuba uyalithanda ihlabathi lokuthunga, musa ukuthenga umatshini esisiseko kakhulu. Eyona nto ingcono kukuba iphakathi, inemisebenzi emininzi kwaye ivumela ukuba siqhubele phambili kancinci. Kungenjalo, ngethutyana nje elingephi liya kuba lidala kwiimfuno zethu.
Kwaye ungakhathazeki ukuba awuyazi indlela yokusingatha ngayo ekuqaleni, apha unako funda ukuthunga ngokulula nangokucacileyo.
Zeziphi iimpawu ekufuneka ubenazo umatshini wam wokuqala wokuthunga?
iintlobo zokuthunga: Enye yezinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo yimithungo. Kwimisebenzi esisiseko kakhulu, umatshini onokumbalwa uya kufezeka. Ukuba akunjalo, khetha ezona zithungo zininzi. Ubude bomthungo bubalulekile xa usebenza ngamalaphu atyebileyo. Ngoko ke, siya kufuna imithungo emide. Ububanzi bemithungo bukwabalulekile ukuba uya kwenza umsebenzi onje beka iibhanti ezilastiki okanye i-overcasting.
eyelet: Kukho iiyantlukwano ezimbalwa phakathi kwazo. Ngokuqinisekileyo, ukwenza iqhosha kwizinyathelo ezine akufani nokwenza enye. Into ekufuneka uyikhumbule kuba ngale nkcukacha sinokwenza amaqhosha ahlukeneyo kwiingubo.
iindawo yenaliti: Izikhundla ezininzi zomshini wokuthunga, ukhetho oluninzi luya kuba nalo xa sikhetha iintlobo ezahlukeneyo zokuthunga.
uphawu lomatshini: Ngokubanzi, kusoloko kungcono ukubeka ithemba lakho kwiibrendi ezaziwa ngcono. Ngaphezu kwayo nantoni na kuba siyazi ukuba sihlawula iimpawu ezintle. Ukongeza, siya kuba nenkonzo yobuchwephesha ekufutshane kunye neendawo ezahlukeneyo esizidingayo.
Potencia: Nceda uqaphele ukuba oomatshini abanamandla angaphantsi kwe-75W abafanelekanga ukuthunga amalaphu ashinyeneyo.
Khumbula ukuba umatshini wokuthunga uneenzuzo ezininzi. Enye yezona zinto ziphambili ukukwazi ukugcina ii-euro ezimbalwa kwiimpahla. Ngokuqinisekileyo uye uphelelwe lithemba xa abantwana belahlekelwa yimpahla entsha okanye xa usiya evenkileni kwaye ungafumani nantoni na ehlangabezana neemfuno zakho. Ngoku unokutshintsha konke oku, ngomonde omncinci kunye nokuzinikela. Ngokuqinisekileyo:
Kwezi meko, musa ukuzivumela ukuba uphazanyiswe yi oomatshini bokuthunga abadala kuba zinzima kakhulu ukuphatha kwaye namhlanje zisetyenziswa kakhulu njengento yokuhombisa kunayo nayiphi na enye into. Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali luyingxaki kuwe, unokuhlala ubhenela ekuthengeni oomatshini bokuthunga besandla sesibini.
Umatshini wokuthunga wasekhaya vs umatshini wokuthunga wamashishini
Ngaba uyazi eziphambili umahluko phakathi komatshini wokuthunga wasekhaya kunye nomatshini wokuthunga weshishiniyena? Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeenkcukacha ofanele uzazi ngaphambi kokuba uqalise ukuthenga enye yezi zimbini. Apha kwakhona kukho izinto ezininzi omele uzazi.
umatshini wokuthunga wasekhaya
Njengoko igama layo libonisa, umatshini wokuthunga wasekhaya ngowona unemisebenzi esisiseko yemisebenzi eqhelekileyo. Phakathi kwazo sigxininisa imisebenzi yokuthunga esiyaziyo sonke. Thunga ezinye iimpahla, thunga iinyembezi, i-seams okanye iziphu.
Umatshini wokuthunga wamashishini
Zenzelwe eyona misebenzi inzima. Baqinisekisa abanye umsebenzi wobungcali ngakumbi kunye nemithungo exhathisayo. I-Upholstery okanye iintambo zifanelekile ngolu hlobo lomatshini. Into angayicingeliyo kumaqabane akhe. Ukongeza kuyo yonke le nto, kufuneka kuthiwe xa sifuna umatshini wolu hlobo, kungenxa yokuba sinomsebenzi omkhulu imihla ngemihla kwaye ngenxa yokuba sele singaphezu kwamava kwihlabathi lokuthunga. Zenzelwe ukusebenza kunye nemiqulu emikhulu yeendwangu kwaye kungekhona nje ukuba kwifektri, kodwa nokuba sekhaya.
Basinika isantya esiphakathi kwe-1000 kunye ne-1500 yezititshi ngomzuzu, kunjalo, nayo inecala elibi. Kuya kudla amandla amaninzi kunomatshini oqhelekileyo kwaye banokwenza ingxolo ngakumbi kunabanye.
Apho ukuthenga umatshini wokuthunga
aNamhlanje sineendawo ezininzi apho sinokuthenga khona umatshini wokuthunga. Kwelinye icala, sinayo i iivenkile zesebe, hypermarkets kwakunye neevenkile apho unokufumana ezinye iimveliso zekhaya. Ngokuqinisekileyo, ukongeza koko, unawo amanqaku asemthethweni amele uphawu ngalunye koomatshini.
Kodwa ukuba awufuni kuchitha iiyure ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, ukuthengisa kwi-intanethi lolunye lolona khetho lukhethekileyo. Amaphepha afana neAmazon Banazo zonke iintlobo zeemodeli., kunye neempawu zayo ezineenkcukacha kunye namaxabiso akhuphisanayo. Ngapha koko, unokugcina ii-euro ezimbalwa xa uthelekisa neevenkile ezibonakalayo.
izixhobo zokuthunga umatshini
Bonke oomatshini bokuthunga beza nezinto ezininzi. Ngokuqinisekileyo, oku kunokuxhomekeka kuhlobo lwemodeli. Nangona kunjalo, iindawo ezisecaleni ziya kuhlala zisisiseko sokuthenga kwethu. Xa kuziwa ekuzithengeni, okoko nje ujonge kwi iinkcukacha zomatshini wakho. Apho baya kukuxelela ukuba loluphi uhlobo olufunayo okanye, ukuba luxhasa zonke iindawo.
Okulandelayo siza kubona i izixhobo zokuthunga umatshini ezixhaphake kakhulu:
Nangona sicinga ukuba iya kusinceda ngemisonto esinayo, akwanelanga. Ngamanye amaxesha, sidinga imibala emininzi, kwiinketho ezininzi zokuqala eziza engqondweni. Khumbula ukuba kubalulekile ukuba intambo yepolyester kunye ne-embroidery. Kwivenkile apho uthenga khona umatshini, baya kuba nakho kuwe.
Nangona oomatshini abaninzi sele benabo, kufanelekile ukuba bathathelwe ingqalelo. Ndiyabulela kubo, unokwenza iintlobo ezahlukeneyo ze-seams. Awunakuba ngaphandle kwabo!
Ukuba iinyawo zokucinezela okanye iintambo zisisiseko, kuthekani ngeenaliti? Abanye beza nomatshini wethu, kodwa khumbula ukuba abanye banokulahleka endleleni. Ngoko hlala ukufutshane iinaliti ezininzi. Kungcono ukukhetha iinaliti zamalaphu ahlukeneyo Umgangatho olungileyo.
Kunye nee-bobbins, kungcono ukukhangela ityala. Ngaloo ndlela awusayi kuphosa nayiphi na. Kungcono ukuba malunga ne-12 okanye i-15. Gcina loo nto engqondweni!
Ukuba ubona ukuba awufuni ukuba nezi zincedisi ngabanye, unokuhlala uthenga into ebizwa ngokuba yipakethi. Kuyo, uya kufumana eyona ibalulekileyo ukongeza kuyo ezinye izikere kwiimodeli ezahlukeneyo ukulungiselela imisebenzi yethu. Awunakuphinda uphoswe ngabasiki kunye neeteyiphu zokulinganisa.
Izimvo ezi-23 kwi«»
Julayi 31, 2018 kwi-6: 34 pm
Ndiyathandabuza phakathi kobhuti cs10, bhuti fs40, singer 6699, alfa cooakt 500
Julayi 31, 2018 kwi-6: 35 pm
Yeyiphi eya kuba yeyona ipheleleyo?
Agasti 1, 2018 kwi-9: 35 am
Ngexabiso lemali, iSinger Scarlet 6699 iphumelele. Ukuba ufuna eyona ipheleleyo, ngoko ke iCompakt 500E Plus kodwa ixabiso layo liphezulu kakhulu.
EyoMqungu 2, 2019 e 1:43 pm
Molo unyaka omtsha!!
Ndingathanda ukuba nindincede please, ndinomntwana oyintombazana oneminyaka eyi 8 othanda ifashoni kunye noyilo lwempahla ukusukela esemncinci, yinto ephuma kwindalo yakhe, yinkanuko yakhe, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndibonile. umatshini wokuthunga we-lidl malunga ne-78 ye-euro ngaphezulu okanye i-mens andikhumbuli kakuhle, umcimbi kukuba wawungowokugqibela kwaye andizange ndiqiniseke ukuwuthenga ngenxa yeenkcukacha ezincinci.
Akunjalo ukuba ndifuna ukuchitha imali eninzi, kodwa ke, andifuni ukuthenga into eya kuthi kamva ibe nzima kum ukufumana izixhobo, njl., kuba sihlala kwiiCanary Islands kwaye yonke into ihamba ngokucothayo. Ndiyayazi iMvumi ubomi bam bonke, bekuhlala kukho endlwini yam, kwaye ndingathanda ukuba neyona ilungileyo ngokomgangatho kunye nexabiso kwaye ndilahlekile nokuba yiMvumi okanye enye oyincomayo. Sifuna ukuyisebenzisa ukuze sifunde kwaye ihlale ixeshana njengoko siqhubela phambili, ungandinceda kwaye ucebise abanye nceda.
EyoMqungu 2, 2019 e 2:56 pm
Ukusuka kwinto ondixelela yona, imodeli endiyincomayo kakhulu yiSinger Promise, umatshini wokuthunga olula kodwa othembekileyo ekulula ukuwusebenzisa kwaye oya kuvumela intombi yakho ukuba iphuhlise izakhono zayo kwihlabathi lokuthunga.
Njengoko ufumana amava, uya kukwazi ukwenza umtsi kwiimodeli ezipheleleyo, kodwa ukuqala, le yeyona ndlela icetyiswayo ngaphandle kwamathandabuzo, kwaye iyathengiswa ngoku.
Amayeza aya kulayisha
Molweni bendihleli ndinomatshini wokuthunga.kodwa ngoku ndifuna ukuthunga ezinye izinto kwaye le ndinayo ayindiphenduli,ndizibone zininzi kwi internet kodwa andikwazi kugqiba.ndidinga uncedo lwakho.ndiyathandabuza. malunga noMzalwana cx 7o, okanye uMvumi STARLEYT 6699. .enkosi kakhulu
Ngowuphi kwaba babini othunga ngcono umthungo?
Matshi 1, 2019 kwi10: 04 am
Kwiimodeli oziphakamisayo, zombini zikhetho ezintle, phantse zobuchwephesha. Umatshini weSinger uphelele ngakumbi njengoko unemithungo engaphezulu (100 vs. 70).
Ngokuphathelele uMzalwana uCX70PE, imodeli ejolise ngakumbi kwiPatchwork kwaye imalunga ne-50 yee-euro ngexabiso eliphantsi kunoMculi, ke ukuba uyahlangabezana neemfuno zakho ngale modeli, lolunye ukhetho olukhulu.
UTshazimpuzi 9, 2019 ngexesha 9:10 am
Ndikhangela umatshini wokuthunga ophathwayo okhawulezayo kuba ndiqhele ukuthunga noogxa bam bakudala be-alfa kunye ne-refrey kwaye abo ndibone koogxa bacotha kakhulu.
Ndiyifunela ukuthunga okuqhelekileyo kodwa ndomelele kwaye ndikwazi ukuthunga izinto ezishinyeneyo ezifana neleatherette. Uhlahlo lwabiwo-mali lwam lujikeleze i-€ 200-400. Zininzi iibrendi kunye nezimvo ezininzi endingaziyo ukuba mandiqale ngaphi. Phakathi kweziphi enindicebisa ngazo nithathela ingqalelo ukuba ndijonge isantya, ukomelela, kunye nokuguquguquka.
UTshazimpuzi 9, 2019 ngexesha 10:47 am
Ukusuka kwinto osixelela yona, imodeli enokuthi ilungelelaniswe kwinto oyifunayo yiSinger Heavy Duty 4432. Ingumatshini oqinileyo (umzimba wayo uyintsimbi kunye nepleyiti yensimbi), ngokukhawuleza (i-1100 stitches ngomzuzu) kunye nokuguquguquka. (ungathunga zonke iindidi zamalaphu kwaye ineentlobo eziyi-32 zemithungo).
Eyona nto ingcono kukuba ingena ngokugqibeleleyo kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho.
UTshazimpuzi 16, 2019 ngexesha 9:55 am
Molo, ndinomdla wokuthenga umatshini omtsha wokuthunga, kuba lo ndinawo, andinawo amandla okutsala kunye nokuphakama okuphindwe kabini konyawo lomcinezeli. Ngaphezu kwako konke ndithunga iteyiphu yenayiloni efakwe ilaphu lomqhaphu, kukho indawo ekufuneka ndithunge ngayo amaqhekeza ama-2 enayiloni eshinyeneyo kunye nomqhaphu. Ngomatshini endinawo ngoku ndinemvumi, endisebenza kakuhle kakhulu, kodwa andinawo amandla okutsala. Ngowuphi umatshini owucebisayo?
UTshazimpuzi 22, 2019 ngexesha 11:20 am
Unamandla kangakanani umatshini wakho wangoku? Jonga kuMsebenzi onzima weMvumi ukubona ukuba iyahambelana neemfuno zakho.
Epreli 25, 2019 kwi-1: 44 pm
molweni ndinengoma endiyithengelwe nguSerenade ngoku sele ndibandakanyeka kulomhlaba bendifuna enye into ngakumbi amalaphu aqinileyo nokwenza izinto ezingaphezulu, nindicebisa ngantoni, bendijongisa ialphas. endithandile ngokuyila inyani, kodwa ndingathanda ukwazi ingcebiso yakho.
UTshazimpuzi 26, 2019 ngexesha 11:00 am
Ngaphandle kokwazi ukuba yintoni uhlahlo lwabiwo-mali lwakho, kunzima ukukucebisa kuba uluhlu lweenketho lubanzi kakhulu kwaye phantse nayiphi na imodeli ye-150 ye-euro sele ingaphezulu kumatshini wakho wangoku. Kodwa kuya kufuneka ndiyazi ukuba ufuna ukuchitha i-€ 150, i-€200 okanye i-€400 ukuze ndikunikeze ukhetho lweyona modeli yomatshini wokuthunga ngokusekelwe kwiimfuno zakho.
Ngolwazi osinike lona, ​​ekuphela kwento endiyicingayo kukucebisa iMvumikazi iDuty yokuthunga loo malaphu omelele ngakumbi.
UCanzibe 2, 2019 nge-1: 04 pm
Ndifuna ukunika intombi yam umatshini wokuthunga ngosuku lwayo lokuzalwa. Uye walandela ukuthunga, uyilo lwefashoni kunye nezinye izifundo iminyaka, kodwa andinalo nofifi malunga neli hlabathi loomatshini bokuthunga. Uyayidinga ukuze enze iimpahla zakhe kwaye aguqulele iingcamango zakhe kunye nemizobo kwinto ephathekayo. Ndingathanda kwakhona ukuba ibe yinto engokwemvelo, engabonisi kakhulu ekusetyenzisweni kombane. Ngowuphi umatshini owucebisayo?
Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho!
Meyi 3, 2019 kwi-10: 04 am
Ngaphandle kokwazi ibhajethi yakho, kunzima kakhulu ukuba sincome umatshini wokuthunga.
Kwinqanaba lokusingqongileyo, bonke beza ukuchitha umlinganiselo ofanayo wokukhanya kwiimeko ezininzi. Kwimeko nayiphi na into, yindleko ephantsi kakhulu ukuba iqatshelwe kwi-bill yombane (asithethi nge-air conditioner okanye i-oven, edla kakhulu).
Ukuba usinika umda wento ofuna ukuyichitha, singakunceda ngcono kancinci.
UCanzibe 15, 2019 nge-5: 14 pm
Enkosi kakhulu ngempendulo yakho. Ndilibele ngokupheleleyo ukubhala uhlahlo lwabiwo-mali, luhamba phakathi kwe-150 ukuya kwi-300 ye-euro.
Meyi 16, 2019 kwi-9: 55 am
Ndibhalela kuwe malunga nombuzo wakho malunga nokuba uthenge umatshini wokuthunga.
Ekubeni ufuna njengesipho kumntu osele enolwazi lwefashoni kunye nokuthunga, kukulungele ukubheja kwimodeli enikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zokuthunga. Ngenxa yoko, i-Alfa Pratick 9 ngomnye wabaviwa ababalaseleyo onokuthi ube nabo. Kwaye unohlahlo lwabiwo-mali oluninzi xa ufuna ukunika incwadi yokuthunga, izincedisi okanye iqweqwe.
Ukuba wolula uhlahlo lwabiwo-mali lwakho kancinci, unomatshini wokuthunga we-elektroniki weCompakt 500E obonelela ngoyilo lomthungo ngakumbi kwaye ukomnye umbutho xa kufikwa ekusebenzeni nawo.
Isilimela 18, 2019 ngexesha 11:07 am
Molo, ndinomdla wokuthenga umatshini wokuthunga ohombisa iilogo okanye iileta. Ungandixelela ukuba yeyiphi imodeli eyenzayo? Konke okugqibelele
Isilimela 18, 2019 ngexesha 11:17 am
Ndikubhalela ngomyalezo osishiyele wona kwiwebhusayithi yethu yomatshini wokuthunga.
Ukususela kwinto oyithethileyo, eyona nto inconywayo kukuba uthatha umatshini wokuthunga wePatchwork, yizona zibonelela ngezona ndlela zikhethwa kakhulu xa kuziwa ekufakeni iialfabhethi kunye nemifanekiso eyahlukeneyo.
Umzekelo, iAlfa Zart 01 ngumgqatswa obalaseleyo kwaye ungekho endleleni. Unokwenza yonke into ngayo.
NgoSeptemba 27, 2019 nge-11: 49 am
Molo, ndingathanda ukuba undinike uluvo lwakho ngoomatshini abathathu endinemibono esebenzayo iAlpha 9 Elna 240 kunye neJanome 3622 okanye enye ocinga ukuba indisebenzela kakuhle, enkosi, ndilindele impendulo yakho.
NgoNovemba 10, 2019 nge-10: 24 pm
Ndiyayithanda ibhlog yakho, indinceda kakhulu. Ndiyaqala ukufunda ukusika, ukuthunga kunye nokwenza iipateni kuba ndingathanda ukuzinikela kuyo. Ndifuna ukutyala imali kumatshini olungileyo ondigcinayo kwaye uluncedo kwiilokhwe ngaphezu kwakho konke. Andifuni ukutsiba kuyo, oko kukuthi, hayi eyona isisiseko (hayi eyona ibiza kakhulu endingayi kuyidinga) yeyiphi oyicebisayo?
NgoNovemba 11, 2019 kwi-8: 41 am
Ngokomntu, sincoma i-Alfa Pratik 9. Ingumatshini wokuthunga we-terrain-terrain osebenza kakuhle kubo bobabini abasebenzisi abangenamava kunye nabo sele benolwazi oluyimfuneko ukwenza uninzi lwazo zonke izinto ezinokwenzeka.
NgoSeptemba 2, 2020 kwi-2: 59 pm
Molweni ndinemvumi engu 4830c kodwa ayisasebenzi ncam ukuba yeyiphi ephuma kwibrand enye eneempawu ezifanayo okanye ezingaphezulu kancinci ngoku enkosi
Ndiyamkela imigaqo yabucala *
Injongo yedatha: Ukulawulwa kwe-SPAM, ulawulo lwezimvo.
Ukugunyaziswa: Imvume yakho
Unxibelelwano lwedatha: Idatha ayizukwaziswa kumaqela esithathu ngaphandle koxanduva lomthetho.
Ukugcinwa kwedatha: Uvimba weenkcukacha obanjwe yi-Occentus Networks (EU)
Amalungelo: Unganciphisa, ubuyise kwaye ucime ulwazi lwakho nangaliphi na ixesha.
Umatshini wokuthunga weLidl
Oomatshini bokuthunga beAlpha
Oomatshini bokuthunga abazalwana
Oomatshini bokuthunga beemvumi
Oomatshini bokuthunga beToyota
Oomatshini bokuthunga be-Prime Day
oomatshini bokuthunga bangolwesihlanu abamnyama
oomatshini bokuthunga be-cyber ngomvulo
Oomatshini bokuthunga 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Ulwazi malunga neicookies